I-Raw Testosterone powder (58-22-0) Umenzi - Buyaas Steroids powder
I-Raw Testosterone powder esetyenziselwa ukuphatha u-hypogonadism wesilisa kunye neentlobo ezithile zesifo somhlaza webele. Akucacile ukuba ukusebenzisa iTesttosterone powder kumazinga aphantsi ngenxa yokuguga kunenzuzo okanye kuyingozi. I-Raw Testosterone ipowder ingasetyenziselwa i-gel okanye i-patch esetyenziswe esikhumbeni, ukujova kwi-muscle, ithebhulethi efakwe kwisihlathini, okanye ithebhulethi ethathwa ngomlomo.
I-Raw Testosterone powder (58-22-0) ividiyo
I-Raw Testosterone powder (58-22-0) Inkcazo
I-Raw Testosterone powder esetyenziselwa ukuphatha u-hypogonadism wesilisa kunye neentlobo ezithile zesifo somhlaza webele. Akucacile ukuba ukusebenzisa iTesttosterone powder kumazinga aphantsi ngenxa yokuguga kunenzuzo okanye kuyingozi. I-Testosterone ingasetyenziselwa njengejel okanye iqhosha elisebenzisayo kwesikhumba, ukungena kwi-muscle, ithebhulethi efakwe kwisihlathini, okanye ithebhulethi ethathwa ngomlomo.
I-Raw Testosterone ipowder isetyenziswe njengendlela yokwenza i-doping phakathi kwezemidlalo ukuze kuphuculwe ukusebenza.
I-Anabolic-androgenic steroids (i-AAS), kuquka i-Raw Testosterone powder kunye neesters zayo, sele ithatyathwe ekuphuculeni ukuphuhliswa kwemisipha, amandla okanye ukunyamezela. Bakwenza ngokuthe ngqo ngokunyusa i-protein protein synthesis. Ngenxa yoko, iimbumba ze-muscle zikhudlwana kwaye zilungisa ngokukhawuleza kunomntu ophakathi.
I-Raw Testosterone powder (58-22-0) Suqobo
Igama lemveliso I-Raw Testosterone powder
Igama leKhemikhali Axiron, Androgel, Fortesta, Testopel, Striant, Testim, Delatestryl, Androderm, ebizwa ngokuba nguVavanyo, okanye i-Test Base, i-testosterone no-ester.
uhlobo Numama Andriol, Androderm, AndroGel, Axiron, Delatestryl, Depo-Testosterone powder, Intrinsa, Nebido, Omnadren, Primoteston, Sustanon, Testim, TestoGel, TestoPatch, Testoviron, and Toran
Iqela leziyobisi I-Androgen, i-anabolic steroid, i-agent ye-anabolic
Inani leCAS 58-22-0
I molecular Fi-ormula C19H28O2
I molecular WSibhozo 288.42
IMasaisotopic Mass 288.209 g / mol
Ukuxuba Point 153-157 ° C
I-Biological Half-Life Iiyure ze-2-4
Kubonakala Ukumhlophe okanye ukucima umhlophe omhlophe okanye ukukhanya okuluhlaza kristallini
Sukufaneleka Emanzini, i-23.4 mg / L kwi-25 deg C
isicelo I-hormone ye-Steroid, iyeza, i-gel, ipaki, ukwakha umzimba
ngokutsha 1 ngenxa I-Raw Testosterone powder (58-22-0)
5 ngaphandle 5
admin - Ngamana 6, 2019 :
Imveliso ye-TESTOSTERONE POWDER inomdla kakhulu.
omlinganiselo yakho Rate ... egqibeleleyo Kulungile umndilili Ukuba imbi Imbi kakhulu
I-Raw Testosterone phenylpropionatee powder (1255-49-8)
I-1-Testosterone (i-Dihydroboldenone) ipowder (65-06-5)
Konke Okufuneka Ukwazi Ngo-Anadrol (i-Oxymetholone) yoKwakha
Isikhokelo esiphezulu seTesttosterone sokuqhaqha isakhiwo sokwakha umzimba
Ukuhlaziywa okunzulu kweTurinabol kwakha umzimba